နေပြည်တော် ဥပ္ပါတသန္တိစေတီ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Local Guides » နေပြည်တော် ဥပ္ပါတသန္တိစေတီ
Posted by weiwei on Feb 4, 2011 in Local Guides, Travel | 23 comments
wei's photos စိတ် ဥပ္ပါတသန္တိစေတီ
နေပြည်တော်ကိုသွားဖို့ ကိစ္စတစ်ခုပေါ်လာတာနဲ့ ရန်ကုန် – နေပြည်တော် ကားလမ်းသစ်ကနေ သွားလိုက်တယ်။ ထောက်ကြံ့အလွန်မှာ နေပြည်တော်လမ်းစပြီး ဂိတ်ကြေးကောက်တဲ့ဂိတ်တစ်ခုရှိပါတယ်။ မိုင်တိုင် သုညကနေစပြီး ကွန်ကရစ် အချောလမ်းပါ။ လမ်းဖြတ်ခ ကားသေးတစ်စီးကို ၅၀၀၀ ကျပ်ပေးရပါတယ်။ မနက်စောစောထသွားဖြစ်လို့ ကားပေါ်မှာ အိပ်ရက်နဲ့လိုက်သွားလိုက်တယ်။ တစ်လမ်းလုံး ကားလဲရှင်း လူလဲရှင်း ပတ်ဝန်းကျင်မှာလဲ အပင်နဲနဲကလွဲပြီး ဘာမှမတွေ့ရဘူး။ ၁၁၅ မိုင်ကိုရောက်တော့မှ ဆိုင်အနဲငယ်တွေ့ရလို့ ခဏနားပြီး မနက်စားစားလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ နေပြည်တော်ကို ဆက်ထွက်လာခဲ့တာ မိုင် ၂၁၀ လောက်မှ နေပြည်တော်ကို ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ကိစ္စ၀ိစ္စတွေကို နေ့ခင်းပိုင်းမှာ လုပ်ပြီးတာနဲ့ အချိန်ပိုနေလို့ နေပြည်တော်က ဘုရားကို သွားဖူးဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဒီဘုရားကို နိုင်ငံခြားက ဗမာတွေသာမက ဗမာပြည်က ဗမာတွေပါ ရောက်ဖူးသူနဲမှာမို့လို့ ဓါတ်ပုံတချို့ ကြိုးစားပြီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ….
အရမ်းနေပူနေတဲ့အချိန်ပေမယ့် အရမ်းပူမနေဘူး။ ဘုရားပေါ်ကို ဓါတ်လှေကားနဲ့တက်လိုက်တယ်။ ရွှေတိဂုံဘုရားအသေးစားတစ်ခုကိုရောက်သွားသလိုပါပဲ။ ထူးခြားတာကတော့ ဘုရားဖူးမရှိသလောက်နဲ့ အလွန်အေးချမ်း တိတ်ဆိတ်နေတယ်။ ဘုရားအတွင်းထဲကို ၀င်လိုက်တော့ အေးချမ်းမှု၊ သန့်ရှင်းမှုနဲ့ ကြီးကျယ်ခန်းနားမှုတွေကို ခံစားလိုက်ရပါတယ်။ စကျင်ကျောက်ရုပ်လုံးဖော်ပန်းချီတွေကို ဘေးပတ်ပတ်လည်မှာ ခန့်ခန့်ညားညားတွေ့ရတယ်။ အချိန်သိပ်မရလို့ ခဏပဲလှည့်ပတ်ကြည့်ပြီး ပြန်ဆင်းခဲ့တယ်။ ဆင်ဖြူတော်ကို သွားကြည့်မလို့ စုံစမ်းကြည့်တော့ နေ့ခင်းအချိန် ဆင်ကျောင်းချိန်မို့လို့ ညနေ ၅ နာရီမှ တွေ့လို့ရမယ်ဆိုတာနဲ့ ဆင်ဖြူတော်ကို မကြည့်လိုက်ရပဲ ပြန်ခဲ့ရပါတယ်။
Thanks share pics&info.
တရုတ်ပြည်ထဲမှာပဲ ခရီးသွားနေရတာ ငြီးငွေ့လာလို့ ..
ပြည်တွင်းကနေ ဓါတ်ပုံတင်ရတာ စိတ်ရှည်ရပေမယ့် တင်လို့တော့ရပါတယ် …
ဘယ်တုန်းက မြန်မာပြည်ထဲ ပြန်ရောက်တာတုန်း .. ဘုရားမှာ လူမရှိတာ .. ဆင်ကို တွေ့ချင်တိုင်း မတွေ့ရတာကို စိတ်ပျက်သွားတာလား .. ဒါမှ မဟုတ် အေးချမ်းတဲ့ သဘောကို တင်ပြချင်တာလား .. လား
car accident အဖြစ်များတဲ့အတွက် လမ်းတလျှောက် သတိပေးဆိုင်းဘုတ်တွေ အများကြီးတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ကျွန်မလဲ အိမ်ကကားနဲ့ ကျွန်မဦးလေးက မောင်းပို့တာဆိုတော့ ဖြေးဖြေးပဲ မောင်းသွားကြတယ်။ တစ်နာရီ မိုင် ၆၀ ထက်မပိုရလို့ ရေးထားပေမယ့် လမ်းကကောင်းပြီး ကားရှင်းလို့ ကားတွေက မိုင် ၁၀၀ ကျော်နှုန်းနဲ့ မောင်းနေကြပါတယ်။ ကားချင်းတိုက်ပြီးဖြစ်ကြတာမဟုတ်ပဲ တစ်စီးထဲ မှောက်ကြတာတွေဆိုတော့ အရှိန်မထိန်းနိုင်တာရယ်၊ လမ်းက တဖြောင့်ထဲဆိုတော့ ပျင်းပြီး အိပ်ငိုက်မိလို့များ ဖြစ်တာလားလို့ပဲ ထင်မိတယ်။
အင်မတန် သာတ်ပယ် ပါ တယ် ။ ဒါပေမဲ့ လူ သိပ် မရှိဘူး နော် ။
ကားတစီး ငွေ၅၀၀၀ လမ်းခွန်ပေးရတယ်ဆိုတော့ မများဘူးလား။ အန်တီဝေလုပ်တာနဲ့ ဒီကောင်တွေ ကြာသင့်တာထက် နောက်ထပ် ၅ရက်လောက် အာဏာဆက်မြဲနေအုံးတော့မယ်။ နောက်တခါသွားရင်ပြောပါ အသိအဖိုကြီးတယောက်အတွက် ပါဆယ်တထုပ် လူကြုံပါးချင်လို့။ သူ့လက်ထဲကို ရောက်အောင်ထည့်ခိုင်းပြီး သေချာတာနဲ့ ပေးထားတဲ့ နံပါတ်အတိုင်း လက်ကိုင်ဖုံးကတဆင့် ဖုံးခေါ်ပြီးရင် ကိစ္စပြီးပါပြီ။
ဘုရားပတ်ဝန်းကျင် လွင်တီးခေါင်ဆိုတော့ နေ့လည်ဆို တော်တော်နေပြင်းမယ် ထင်တယ်နော်။
နေက တော်တော်ပြင်းတယ် … ဘုရားရင်ပြင်ပေါ်က အပူခံကျောက်ပြားတွေကြောင့် ခြေထောက် မပူဘူး … လှိုင်ဂူဘုရားစေတီလိုတည်ထားလို့ အတွင်းပိုင်းမှာ အရမ်းအေးပါတယ် …
ပုံတော် ကို အနီးကပ် အသေးစိတ် ဖူးမျှော် ကြည်ငြို ခွင့် ရ အောင် ပို့စ် တင် ပေး သူကို ကျေးဇူး တင်ပါဧ။်။
ရတနာ သုံးပါး ကို ရင်ထဲက ကြည်ငြို မှု အပြည့် အ၀ နဲ့ တည်ထား ကိုးကွယ် တဲ့ ဘုရားဒကာ တွေ ကတော့ ကုသိုလ် တွေ ထားစရာ နေ ရာ မရှိလောက်အောင် ခမ်းနား သပ္ပါယ် ပါတယ်။
တစ်အချက်က လမ်းဖြောင့်လမ်းရှင်းနေတော့ အမြန်မောင်းမိတာ ..
နှစ်အချက်က လမ်းဘေးက သိပ် ရှင်းနေတော့ အရှိန် ဘယ်လောက်ရောက်နေလဲဆိုတာ မခန့်မှန်းမိကြတာ (သစ်ပင်တွေ ရှိရင် ရိတ်ကနဲ ရိတ်ကနဲ ဖြစ်လို့ မြန်နေမှန်းသိရတယ်)
သုံးအချက်က ကွန်ကရစ်လမ်း ဆိုတာ ရေပြင်ညီပဲ လောင်းလို့ ရတော့ အကွေ့အချိုးတွေ ပုံမှန် မဖြစ်တာ ..
လေးအချက်က ကွန်ကရစ်သား မာ ကြမ်းတာကြောင့် တာယာမှာ ပြဿနာ ဖြစ်တာ
ငါးအချက်က သတ်မှတ်ကီလို ၁၀၀ (မိုင် ၆၀) ထက် ပိုမောင်းတာ .. ဒါကြောင့် ကားကောင်းတွေမှာ အဖြစ်များတာ
ခြောက် အချက်က စောင့်ကြည့်တဲ့ ဖမ်းတဲ့ အဖွဲ့မရှိလို့ ပိုမောင်းတယ် ..
ခုနစ်အချက်က သိပ်ရှင်းလို့ အိပ်ငိုက်တာ ..
ရှစ်အချက်က ကြွားချင်လို့ (ငါ ဘယ်နှနာရီနဲ့ မောင်းနိုင်တယ် ပေါ့)
ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန် မောင်းနေလို့က ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး ..
ပြသနာအရင်းမြစ်ကတော့ အကြောက်လွန်ရောဂါရပြီး ပြောင်းပြေးတဲ့သူကြီးပဲဗျို့။ သူသေရင် အဝေးပြေးလမ်းကြီးကြောင့် သေရတဲ့သူတွေက ဝိုင်းဘေဖို့စောင့်နေကြတယ်။
– မိုင်၁၀၀ ကိုကျုပ်တောင် တောက်လျှောက်တင်မမောင်း၇ဲဘူး..။ ကားကောင်းတွေတောင် ..ပြိုင်တာအတွက်မလုပ်ထားရင် .. လေထဲဝဲလာနေတာ..။ ထိမ်းရလည်းခက်သွားးပြီ.။ဝေမမဆိုလိုတာ .. ကီလိုများဖြစ်နေသလား..။
– ကားစပိးဒ်က ..မောင်းရင်..မီတာတချိန်လုံးစစ်နေသင့်တာပေါ့.။ အဲဒါက အဲဒီလိုကြည့်စစ်ဖို့အတွက်ထားတာပါ..။ အဲဒီထဲ အင်ဂျင်လည်နှုန်းနဲ့ စပိဒ် အချိုးလွဲတာ ပြလာရင် အန္တရယ်ဖြစ်နိုင်ပြီပဲ..။
– ကမ္ဘာ့နာမယ်အကြီးဆုံး ဂျာမန်အော်တိုဘန်းတွေရော..ယူအက်စ်ဖရီးဝေးတွေရော..အကုန်ကွန်ခရစ်နဲ့ လုပ်ရတာချည်းပဲ..။ ကတ္တရာနဲ့ မလုပ်ရပါဘူး..။
လမ်းက ကြမ်းရတာလမ်းဆောက်တဲ့အင်ဂျင်နီယာတွေရဲ့ သာမန်စတန်းဒတ်ပါပဲ.. ။ချောရင် ..အကုန်ဂျွမ်းထိုးကုန်မှာပေါ့..။
ကြုံရင်အဲဒီလမ်းရဲ့ ကွန်ကရစ်အနီးကပ်ဓါတ်ပုံတင်လိုက်.. ယူအက်စ်ကလမ်းတွေနဲ့ တိုက်စစ်နိုင်ဖို့ ပြန်တင်ပေးမယ်..။
နေပြည်တော်လမ်းလူတွေသေလွန်းတယ်ဆို .. ယူအက်စ်-ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာ လမ်းတံတားမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့.. အာအိုင်တီက မြို့ ပြဌာန ပါမောက္ခဟောင်းဦးမင်းဝဏ်လိုလူမျိုးကို အကြံညဏ် တရားဝင်လှမ်းတောင်းဖို့ကောင်းတယ်.။
ဘုရားကိုတစ်ခါသွားတုန်းက ဆင်ဖြူတော်မမြင်ရသေးလို့ သွားကြည့်ဖြစ်လိုက်သေးတယ်.. သွားတဲ့အချိန်ကကံကောင်းချင်တော့ ဆင်တွေရေချိုးတဲ့ အချိန်ဖြစ်နေတယ်လေ…ဆင်ဖြူတော်ကတော့ရေကန်တော်ထဲဝင်ပြီးချိုးတာတွေ့လိုက်ရတယ်.အခြားဆင်ကတော့ ကန်ဘေးမှာရေပန်းနဲ့ပေါ့…
ကွန်ကရစ်တွေမှာ အမြန်မောင်းတော့ လမ်းစလစ်ဖြစ်တာပါ။ ကတ္တရာ လမ်းက ဘရိတ်နင်းရင် သူက ချာလပတ်လည်ရုံက လွဲလို့ သိပ်မဖြစ်ပေမဲ့ ကွန်ကရစ်လမ်းမှာ မောင်းလို့ လမ်း မှာ တခုခုကြောင့် အရှိန်ပြင်းရာကနေ ပြောင်းသွားမယ် ဆိုရင် ကားက လိမ့်သွား နိုင်ပါတယ်။ လိမ့်သွားမယ် ဆိုရင်တော့ ပါတဲ့ လူ သေမှာဘဲ။
ဆူးမရေ.. ငါကားဝယ်ပြိးရင်ညည်းကို ဒရိုင်ဘာခန့်မယ်။ ကားအကြောင်းဒီလောက်သိနေတာကို………..
အဘနီရေ လိုက်မောင်းပေးရမလား။ ဘာကားလဲ.. အော်တိုဂီယာဆို ပိုအဆင်ပြေတယ်နော်။
ကားမောင်းလိုင်စင်ကောရှိလား ကိုကျော်သူနဲ့ဆက်သွယ်လိုက်ပါ ယဉ်မောင်းတစ်ယောက်လိုနေတယ်ကြားလို့
အင်း၊ ဘုရားအကြောင်းကနေ၊ လမ်းအကြောင်းရောက်သွားကြတယ် ထင်ပ
ပိုက်ပိုက်တွေ နှမျောစရာကြီး ဘုရားတည်တာ ကုသိုလ်ရပေမယ့် သူ့လို ဂျိုးကပ်ကြီးအတွက်တော့ ယောက်မတစ်ချောင်းမဖြစ်နိုင်ဘူး အဲဒီလိုဘုရားတည်ပြီး အကုသိုလ် အပေါက်ဖာမယ့်အစား တကယ်လိုအပ်နေတဲ့နေရာတွေမှာ လှူဒါန်းလိုက်ရင် ကျွန်တော်တို့လည်း လှိုက်လှိုက်လဲလဲ သာဓုခေါ်မိမှာပါ။
ဘုရားဖူးရတာကတော့ ၀မ်းသာအားရပြီး ကြည်ညိုစရာကောင်းပါတယ် ….. ဆင်ဖြူတော်ကိုလည်း သွားကြည့်ဖြစ်တယ် ….. အဆင်မပြေတာကတော့ သန့်ရှင်းရေးသွားရတာပဲ တစ်ယောက်ကိုတစ်ရာတောင်ပေးရတယ် …. ပိုက်ဆံတောင်းတဲ့သူကလည်း မျက်နှာထားတင်းတင်းနဲ့ …….. ပိုက်ဆံကျတောင်းပြီး သန့်ရှင်းရေးကျကောင်းကောင်းမလုပ်ဘူး …. ညစ်ပတ်နေတယ် …… စိတ်ပျက်စရာကောင်းတယ်ဗျာ …… တန်ခိုးကြီး နာမည်ကြီး ဘုရားတော်တော်များများပါပဲ အဲဒီလိုပဲ အမြဲတမ်းကြုံတွေ့ရတယ် ……..
ပိုစ် အဟောင်းလေးလည်း ပြန်ဖတ်တော့ အရသာ ရှိတယ်။
ကင်မရာရယ် ဘာကိုရိုက်ပြရမယ်ဆိုတဲ့ idea ကိုလည်း သဘောကျသဗျာ …။